रुनुका यस्ता ७ फाइदा थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ ! – Khabaarpati
December 29, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on रुनुका यस्ता ७ फाइदा थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ !
मान्छे सुखमा हास्ने र दुःखी हुँदा रुने प्राकृतिक प्रकिया मानिन्छ । तर, मानिस रोएको हामी जोकोहीलाई पनि पनि मन पर्दैन । हाँस्दा स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदा हुनेबारे सुनेका छौं तर, रुँदा हुने फाइदाको बारेमा कसैलाई थाहा नै नभएको हुसक्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
१. रुँदा आँखाको दृष्टि क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । आँखामा आँसु आउँदा नानी चिसो हुन्छ र आँखा सुख्खा रहन पाउँदैंन र यसो गर्दा आँखाको दृष्टि क्षमता बढ्छ ।३. जब मानिस दुःखका कारण रुन्छ, त्यतिबेला शरीरमा विषाक्त पदार्थ बन्न थाल्छ । यस्ता विषाक्त पदार्थ आँसुमार्फत् बाहिर निस्कन्छन् ।
४. शरीरमा म्याग्नीज बढी हुँदा थकाई, रिसजस्ता समस्या आउँछन् । रुनाले शरीरमा म्याग्नीजको स्तर कम हुन्छ, जसबाट मष्तिस्क राम्रो हुन्छ र मानिसले हल्का महसुस गर्छन् ।५. बढी तनाव महसुस गरिरहेका बेला रुने हो भने तनाव कम भएको महसुस गर्न सकिन्छ । रुँदा शरीरमा एन्डोर्फिन, ल्युकाइन–एन्काफालिन तथा प्रोल्याक्टिन नामक तत्वको स्तर कम हुन्छ, जसबाट तनाव पनि कम हुन्छ ।
६. समस्या परेको समयमा दिमाग र मुटको लिंबिक प्रणाली सहज हुन्छ जसले आराम प्रदान गर्छ । रुँदा मन सफा तथा हल्का महसुस हुन्छ ।७. रोएपछि लगभग ८५ प्रतिशत महिला तथा ७३ प्रतिशत पुरुषको रिस कम हुन्छ । महिला वर्षमा ४७ पटक रुन्छन् भने पुरुष ७ पटक रुन्छन् । मान्छे औषत ६ मिनेट रुन्छ । साँझ ७ बजेदेखि १० बजेको समयमा मान्छे सबैभन्दा धेरै रुन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,